Filtrer les éléments par date : mercredi, 27 juin 2018
mercredi, 27 juin 2018 21:16
Palais d’Iavoloha: Les consignes du Chef de l’Etat à l’endroit des membres du gouvernement
Hery Rajaonarimampianina a encouragé le gouvernement à prendre ses responsabilités et à poursuivre les efforts pour asseoir l’apaisement et la paix sociale qui garantiraient la tenue des élections.
mercredi, 27 juin 2018 17:01
Antsirabe: Kilonga milalao
Tontosa soa aman-tsara ny tontolo andron’ny 23 jona ny « Kilonga milalao ». Andiany faha-2 tamin’ity hetsika karakarain’ny Kilonga Events Antsirabe ity, ary ankizy nanodidina ny 180 teo no namaly ny antso sy nisitraka ireo kilalao maro nomanina teo amin’ny tokontany malalaky ny Faritra Vakinankaratra, avaratry ny Katedraly Katolika Antsirabe. Volana natokana ho an’ny ankizy rahateo ny volana jona.
mercredi, 27 juin 2018 16:53
Morondava: Voasambotra ireo jiolahy mpamaky trano
Nanararaotra ny olona variana tamin’ny afomanga ny alin’ny 25 jona ireto jiolahy mpamaky trano ireto, no nanao ny asa ratsiny teo Tanambao, toerana teo ampitan’ny nanapoahana afomanga teto an-drenivohitry ny faritra Menabe.
Voasambotra ny alin’ny 25 jona ihany ny iray, nokarohina ireo namany ka nisy iray hafa voasambotra niaraka tamin’ny entana halatra. Eo ampelan-tanan’ny Zandary izy ireo, mitohy kosa ny fikarohana ireo namany.
Antsohihy: Tonga namafa ny dian’i Andry Rajoelina i Jao Jean
Namory olona teto amin’ny kianja monisipaly Antsohihy io tolakandro io ny Solombavambahoaka voafidy tato Antsohihy sady filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena, Jao Jean.
Nanadio tena tamin’ny resaka nandeha hoe isan’ireo nandray 50 tapitrisa Ariary tamin’ny fandaniana ny lalam-pifidianana izy, ary koa nanankiana ny filohan’ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina, izay vao avy namory olona teto an-toerana ihany koa ny harivan’ny alatsinainy 25 jona lasa teo.
mercredi, 27 juin 2018 15:58
Antananarivo Renivohitra: Fako sy loto no nameno ny tanàna taorian’ny fetim-pirenena
Niroso tamin’ny fanadiovana ny Kaominina Antananarivo Renivohitra, izay nokarakarain’ny Boriboritany Voalohany, androany alarobia 27 jiona 2018 maraina. Nahafeno fiara be efatra, izay mazahaka efatra taonina avy ny fako nesorina.
Hitohy any amin’ireo faritra hafa eto an-dRenivohtra ity hetsika fanadiovana goavana ity.
mercredi, 27 juin 2018 15:23
Fianarantsoa: Lavo tao Andriamboasary i Laza, jiolahy iray malaza mpitsoaka
Nafindra taty Fianarantsoa i Randriarimanana Laza rehefa tratran'ny polisy tao amin'ny 67ha Antananarivo, herintaona nitsoahany taty an-toerana.
Tao anaty fanadihadihana itarihany ny polisy miisa 8 any amin'ny toerana nanangonany ny halatra no nahafahany nitsoaka indray.
Afaka namaha ho azy teo ny fehintanana izy ary nihazakazaka lavitra vao hitan'ny mpitandro filaminana izay nanao tifi-danitra sy nahavoa azy teo amin'ny kibony tamin'ny bala fahatelo.
Ny tolakandron'ny alatsinainy 25 jona teo no nitrangan'izany. Tsy mbola hita ny jiolahy niaraka nitsoaka tamin'i Laza herintaona lasa izay.
mercredi, 27 juin 2018 12:50
Fitrandrahana vy: Manana 3 milliards tonnes ny Faritra atsimo
Ajoro ao Vatovavy-Fitovinany ny Indostria momba ny vy.
Ambony tokoa ny tahan'ny vy (fer - Fe) raha ny ao Fasintsara, Distrikan'Ifanadiana, Faritra Vatovavy-Fitovinany, fotsiny no jerena, mahatratra 38% ny vy ao anatiny.
Raha atao teny tsotra, dia raha maka 1 tonne minerai na ilay toerana misy azy ao, dia 380 kg amin'izay dia vy azo arendrika avokoa.
Ny Firenen-dehibe mandroso rehetra dia manana fototra indostrialy momba ny vy avokoa. (Métallurgie - Sidérurgie).
Rehefa mitrandraka vy anefa dia misy akora sy singa hafa ihany koa ho azo avy ao.
Manana maro isika raha vy, tsy hilaza fotsiny ny any Soalala.
mercredi, 27 juin 2018 12:49
Fitaterana: Nanjavona teny amin’ny arabe ny Taxi-Be
Voahaja amin’ny ankapobeny ny fanahapahan-kevitry ny UCTU (Union des coopératives de transport urbain) fa hanokana ity andron’ny alarobia 27 jona ity, hanaovan’ny mpitatitra amin’ny taxi-be eto Antananarivo renivohitra fitokonana, noho ny tsy fahazoan’izy ireo tohana ara-bola fanomen’ny fanjakana hanalefahana ny fiantraikan’ny fiakaram-bidin’ny solika. 11 volana no tsy voaloa io, ankoatra ny fidangan’ny hetra aloan’ny mpitatitra.
Nampiasa ny fiarany kosa anefa ireo kaoperativa mivondrona ao amin’ny FMA (Fitaterana Mendrika eto Antananarivo) na tsy maro aza izy ireo, tao ireo entin’ny tahotra sao misy manimba ny fiara.
Dia an-tongotra no niazon’ny mpiasa ny toeram-piasany androany. Tsy vitsy koa anefa ireo mpiasa tsy tonga tany an-toeram-piasany noho ny halaviran-toerana nefa tsy misy fiara mpitatitra.
mercredi, 27 juin 2018 12:18
Toamasina: Mihamaro ireo andrinjiron’ny JIRAMA ahiana hampidi-doza
Maro ireo andrinjiro hazo ampiasain’ny JIRAMA eto Toamasina. Misy amin’izy ireny anefa no lo ny fotony, mando lava rahateo ny faritr’i Toamasina ka isany mitarika ny fahasimban’ireo andrinjiro ireo, toy ny hita eny Ankirihiry Avaratra, izay anaovan’ny mponina antso avo satria ahiana hampidi-doza noho ireo andrinjiro mitongilana ahiana ho tapaka, nefa milanja tariby mitondra herinaratra mahery vaika.
mercredi, 27 juin 2018 12:14
Nanamarika ny fankalazana ny fetim-pirenena ny fizarana mari-boninahitra.